निःशुल्क कानुनी सल्लाह टेलिफोन - जर्मन वकिल अनलाइन. सबै भन्दा ठूलो कानूनी.
केही विवाद गर्न सक्छन् स्पष्ट हुन मात्र अदालत मा स्पष्ट छ । तर पनि यदि यो देखिन्छ हटाउन नसकिने, यो मा छ कुनै पनि मामला मा, धेरै ध्यान चिन्तन कि अदालत जोगिन सक्दैन । किनभने यो, मा नै सक्छ, मा स्पष्ट देखिने अवस्थामा, एकदम अधिक समय, पैसा र नसाहरू, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छमा पनि यो मौलिक को पूर्व-जम्मा एक वकील गर्न सक्छन् तपाईं को सन्दर्भ मा एक प्रारंभिक परामर्श. पहिले तपाईं एक वकील सम्पर्क, हामी सिफारिस हाम्रो पोस्ट छ प्रश्नहरू अघि तपाईं सोध्नुपर्छ तपाईं एक किराया महंगा वकील. रूपमा वैध पूर्णतया योग्य वकील, आकलन गर्न सक्छन् मा सफलता को आफ्नो अवसरहरुमा कुनै पनि विवाद को मामला, पक्कै पनि धेरै भन्दा राम्रो को सबै भन्दा राम्रो-अर्थ तर, एक रूपमा शासन, एकदम नजान्ने मित्र, नातेदार, वा छिमेकी । क्रम मा को लागि वकिल तर मामला छैन लागि पहिलो चरण मा कानूनी लागत, लेख: कसरी वकिल संग आफ्नो समस्या एक मुनाफा बनाउन: तीन तरिकामा रक्षा गर्न बस छ । सुरुमा परामर्श छ एक निर्णायक प्रभाव मा थप पाठ्यक्रम को एक कानूनी विवाद छ । किनभने पहिले नै छ कि निर्णय र अधिक-को-अदालत पछि लाग्न एक आफ्नै गतिविधिलाई उपयुक्त देखिन्छ. अस्तित्व, यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर तपाईं आफैलाई सूचित समयमा प्रारंभिक परामर्श बारेमा भेट गर्न सन्दर्भमा, उदाहरणका लागि, को एक आपत्ति गर्न एक दण्ड वा पेश प्रदर्शन । तपाईं सम्झना यस्तो एक समय सीमा, तपाईं गुमाएका प्रक्रिया अघि यो छ पनि थालेका छन् । यो राम्रो छ त्यहाँ छन् भनेर विभिन्न तरिकामा बनाउन कम्तीमा वकील गरेको प्रारंभिक परामर्श लगभग नि: शुल्क छ । सल्लाहकार सहायता ऐन, उदाहरणका लागि, अनुमति दिन्छ छन् जो मा एक कम आय, क्रमशः को सम्पत्ति, एक कानूनी सल्लाह बाहिर अदालत कार्यवाही को एक वकील द्वारा आफ्नो विकल्प को छ । मा भुक्तानी हुनुपर्छ यो मामला छ, एक अधिकतम को एक सानो आर्थिक योगदान को बारेमा दस बीस यूरो. परामर्श मदत छ बाहिर-को-अदालत समकक्षी कानुनी सहायता, जो मात्र हुन सक्छ एक न्यायिक प्रक्रिया अनुरोध गरिएको छ । सल्लाहकार सहयोग हुन सक्छ क्षेत्रमा लगभग सबै व्यवस्था, साथै लागि अनिवार्य मेलमिलापका कार्यवाही हुन नं. यी को, केवल केही विशेष अवस्थामा, जस्तै कर, कानूनी मुद्दाहरू वा अपूर्ण अवस्थामा समावेश छन्. अधिक जानकारी को लागि, को विषय मा निःशुल्क कानुनी सल्लाह लेख त्वरित गाइड छ: कसरी प्राप्त गर्न निःशुल्क कानूनी सल्लाह. पछि मात्र कानूनी सुरुमा परामर्श यो सामान्यतया निःशुल्क छैन । यो शुल्क को एक कानूनी सल्लाह तर पनि यहाँ केही सीमा, यो समय द्वारा वकिल पारिश्रमिक ऐन. अनुसार खण्ड तीस-चार कानूनी सल्लाह सक्छ उपभोक्ताहरु मई अनुरोध को एक अधिकतम यूरो तर, जब यो आउछ कानूनी विवाद बाहिर को व्यापारिक वा स्वतन्त्र गतिविधि हुन सक्छ, शुल्क धेरै उच्च छ । कुनै पनि मामला मा, तर छलफल छ को मामला मा, को ग्रहण को जनादेश मा पालन-अप लागत । लागत को कानूनी सल्लाह यसको पूरा मा द्वारा नजर छ रूपमा छैन सजिलो छ रूपमा, यो पहिलो नजर मा लाग्न सक्छ किनभने, यो वैधानिक आवश्यकताहरु प्रदान गर्न वकील मा कानूनी सल्लाह पर्याप्त त्यसैले वकील पारिश्रमिक ऐन, छ । रूपरेखा सेट अप शुल्क छ, तर अनुमति उहाँलाई, उदाहरणका लागि, र प्रतिलिपि लागत लागि अतिरिक्त कार्ड र साथै नगद, वा अध्ययन को मामला-सम्बन्धित कागजातहरू चाँदी अतिरिक्त. साथै, अधिवक्ता गुणन गर्न सक्छन् आफ्नो राजस्व को ग्रहण द्वारा वर्ग कामले आराम । त्यहाँ, एक रुचाउँछन् बोल्न कार्य संग्रह वा. तर तपाईं चाहनुहुन्छ जे यसलाई कल लागि, वकील यो फाइदा छ कि उहाँले आवश्यकता अझ बढाउन गर्न, केवल एक पटक एक विषय क्षेत्र मा, र एक मामला गर्न सक्षम हुन, धेरै ग्राहकहरु संग आफ्नो ज्ञान र आफ्नो काम छ । तापनि वकील आधारित हुनुपर्छ आधारमा सिर्जना तालिका को शुल्क, तर उहाँ बाध्य पालन गर्न छ । र वास्तवमा, सबैभन्दा को वकील गर्न रुचि चार्ज अनुसार एक तला शुल्क वा पनि राम्रो एक घन्टा को आधार मा.
राशि गणना सिद्धान्त अनुसार मूल्य मा विवाद, साथै हदसम्म र कठिनाई को सम्पादन विवाद मा प्रश्न छ । चौडाई सीमा सक्छ त्यसैले देखि यूरो सम्म पाँच सय यूरो, वा पनि परे.
आफ्नो औसत प्रतिघण्टा दर, हाल छ बारे दुई सय, यो"यूरो, हुनत एक बनाउन पर्छ स्पष्ट भिन्नता: जबकि को औसत प्रतिघण्टा दर को एक वकील लागि निजी व्यक्तिहरूलाई र साना कारोबार संग, बारे एक सय यूरो, यो को मामला मा ठूलो कम्पनीहरु, र मध्यम आकारको कम्पनीहरु वरिपरि, यूरो प्रति घण्टा. यस्तो अनुबंध गर्न वकिल ले यो विवाद सबै अधिक फिर्ता कम मूल्य किनभने, शुल्क तालिका कवर, विशेष मा, को मामला मा साना अवस्थामा हुन असम्भाव्य छ, खर्च । अधिक महत्त्वपूर्ण छ, यो छ, त्यसैले, मा बाबजुद सबै माथि-उल्लेख कानूनी रूपरेखा पहिले नै समयमा संग पहिलो सम्पर्क वकील बारेमा शुल्क र निर्णय अघि एक वकील लागि धेरै कुनै-दायित्व कोटेशन तुलना. वस्तुतः यो केवल छ, र यसैले सबै अधिक ö अपवाद यो कानूनी शुल्क पाता मा पहिलो परामर्श । यहाँ, व्यवस्थापिका सेट छ, मुनाफा को खोज को लागि वकिल, र स्पष्ट सीमा छन् । सुरुमा परामर्श खर्च हुन सक्छ को एक अधिकतम यूरो. तर, यो मात्र लागू गर्न उपभोक्ताहरु । कारोबार लागि, आत्म-रोजगार र बनावटी आत्म-कार्यरत छन् यो यी दुई. बरु, शुल्क त्यहाँ आधारमा सम्बन्धित राशि मा विवाद छ । प्राप्त गर्न (अपेक्षाकृत) सरल तरिका वित्तीय सहयोगका लागि कानुनी शुल्क संग दाबी कानूनी संरक्षण बीमा. यहाँ यो सिफारिस गरिएको छ, तर कुनै पनि मामला मा, र जुनसुकै को को बीमा नीति मा अग्रिम गर्न सोध्न भने बीमा पनि गर्न इच्छुक सबै वा लागू गर्न कम्तिमा एक भाग को लागत को निर्धारित नियुक्ति । अक्सर सुरुमा परामर्श सूचीबद्ध हुनेछैन शुल्क सर्तहरू र अलग - गर्न सक्छ, जो छ, पक्कै को मामला मा, एक धेरै खराब बीमा विवाद छ । साथै, कानूनी संरक्षण बीमा कवर छैन, यो लागत को सबै सल्लाह छ । रूपमा छ, त्यसैले अक्सर"को सानो मुद्रण गर्नुहोस्", भन्न छ कि यो नियम र अवस्था महत्वपूर्ण छ. र भने को अधिग्रहण लागत परामर्श छैन पुष्टि, एक मांग छ देखि यो एक बीमा कम्पनी कर्तव्य - मा छैन लागत परामर्श विराजमान रहन चाहनुहुन्छ छ । किनभने वैधानिक वकील गरेको शुल्क हो, जो द्वारा देय ग्राहक वकील गर्न पछि वकील पारिश्रमिक ऐन को लागि प्रारंभिक परामर्श र सल्लाह, छ, के, को मात्रा, जो लागि कानूनी संरक्षण बीमा कम्पनी जिम्मेवार छ.
मा, बीमा ठेके, यी ग्रहण परामर्श लागत को राशि मा यूरो प्लस भ्याट, जुनसुकै को उच्च लागत र दायित्व जोखिम को लागि वकील र के मूल्य छ मा विवाद छ । को मामला मा रूपमा सामान्य प्रतिघण्टा दर, बीच महत्वपूर्ण मतभेद निर्भर कर्मचारीहरु र अन्य निजी व्यक्तिहरूलाई एक हात मा, साथै फ्रीलांसरों र कम्पनीहरु अर्कोतर्फ, पनि त्यहाँ अवस्थित.
उत्तरार्द्ध लागि, यूरो-कैपिंग लागू गर्दैन, त्यसैले, तपाईं समातेर गर्न धेरै गहिरो खल्ती मा छ । यो पनि साँचो हो भने वर्तमान मामला को हो एक व्यापारिक वा स्वतन्त्र गतिविधि मा एक अन्यथा निर्भर कर्मचारीहरु बुझाउँछ, एक निजी व्यक्ति । तर कम से कम, को वकील गर्न छ यी शुल्क कुनै पनि मामला मा - निर्देशन तिनीहरूलाई द्वारा - को कुल चलानी घटाउनु छ । भने वकील छ मा प्रारंभिक परामर्श, व्यापक गतिविधि को फाइदाको लागि ग्राहक, उहाँले फिर्ता हुनुपर्छ पनि देखि कुल बिल भने, तपाईं मा खडा प्रत्यक्ष जडान संग थालनी परामर्श । यो जरूरी छ कि सुरुमा, परामर्श र अतिरिक्त क्रियाकलाप नै व्यक्ति मा आदेश दिइएको थियो, विषय-सन्दर्भमा सल्लाह र गतिविधि कम से कम आंशिक गर्न समान, र बीच, सल्लाह र गतिविधिहरु को एक अस्थायी सम्बन्ध छ । विशेषज्ञ बारेमा जानकारी प्राप्त एक मुक्त सुरुमा परामर्श सम्पर्क, उपभोक्ता संरक्षण संघ. शायद तिनीहरूले हौं तर पनि एक संघ जस्ता भाडादारों संरक्षण संघ, प्रदान यसको सदस्य एक मुक्त सुरुमा कानूनी सल्लाह भाडादारी विवाद छ । तर, यो ज्यादातर मात्र आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्र को गतिविधि, उदाहरणका लागि, परिवहन र यात्रा व्यवस्था को मामला मा सवारीसाधान क्लब वा श्रम व्यवस्था संग यूनियन.
avukat - kaza trafik Kanunu